विश्वकप फाइनलः न्यूजिल्याण्डले टस जित्यो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकप फाइनलः न्यूजिल्याण्डले टस जित्यो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, असार २९ । १२ औं संस्करणको आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा घरेलु टिम इंग्ल्याण्डविरुद्ध न्यूजिल्याण्डले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । यी दुई टिमबीचको फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः३० बजेदेखि शुरु हुँदैछ ।